Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Ny spike COVID-19 dia mandrahona ny famerenana amin'ny laoniny ny fitsangatsanganana an-trano any UK
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Miaraka amin'ny famerana miova tsy tapaka ho an'ny dia iraisam-pirenena, ny fialantsasatra an-trano dia toa filokana azo antoka amin'ny fotoana fohy.
Ny fialantsasatra eto an-toerana dia natao ho malaza indrindra any Angletera ao anatin'ny 12 volana ho avy.
Ny fiakarana lehibe amin'ny tranga manerana an'i Angletera dia mety hampihena ny fahatokisan'ny mpandeha sasany.
Ny orinasam-pitetezana miomana amin'ny fahavaratra be atao dia mety hiaina onja fanafoanana na fanemorana.
Na eo aza ny fangatahana staycation ao amin'ny UK matanjaka, ny fiakaran'ny aretina COVID-19 ary ny fitakiana fanokanan-tena raha toa ka mety hanohintohina ny drafitra fahavaratra ny 'pinged', ary ny mpiasan'ny fizahan-tany dia mety tsy hahita fidiram-bola tena ilaina amin'ity fahavaratra ity.
Ny fikafika COVID-19 dia mety hanohintohina ny fanarenana fitsangatsanganana an-trano any UK amin'ity fahavaratra ity
Raha ny fitsapan-kevitra natao tato ho ato dia ny fialantsasatra an-tokantrano no voalaza fa malaza indrindra ao anatin'ny 12 volana ho avy, miaraka amin'ny 30% amin'ireo mpamaly UK no misafidy an'ity karazana fitsangatsanganana ity, somary ambany noho ny 32% amin'ireo mpamaly eran-tany no maniry ny dia an-trano. Miaraka amin'ny famerana miova tsy tapaka ho an'ny dia iraisam-pirenena, ny fialantsasatra an-trano dia toa filokana azo antoka amin'ny fotoana fohy.
Na eo aza ny fangatahana avo dia avo, ny fisondrotan-doha lehibe amin'ny tranga manerana ny UK mety hampihena ny fahatokisan'ny mpandeha sasany. Miakatra ny tranga, ny mpitsangatsangana dia mety hampiasa fomba malina kokoa amin'ny dia amin'ny fahavaratra. Ny orinasam-pitaterana miomana amin'ny fahavaratra be atao dia mety hiaina onja fanafoanana na fanemorana satria somary manalavitra ireo faritra fizahan-tany feno olona ny sasany, na eo aza ny fanalefahana.
Ny "pingdemikma" dia namely mafy an'i Angletera, misy olona 618,903 8 nahazo fampandrenesana hitoka-monina mandritra ny vanim-potoana eo anelanelan'ny 14 sy 17 Jolay. Fiakarana XNUMX% izany tamin'ny herinandro teo.
Miaraka amina laharana noraisim-peo misy ping, ny dia dia mety hahatsapa fikorontanana amin'ity fahavaratra ity. Ny vanim-potoana mitokana dia eo amin'ireo karatra ho an'ireo pinged, ary ny famerana ny quarantine an-trano dia hisy fiantraikany amin'ny famandrihana fialantsasatra. Ireo olona manana ping miaraka amina famandrihana akaiky dia toa hanafoana satria tsy afaka mandeha intsony. Miakatra ny tranga noho ny fahasamihafan'ny Delta azo nafindra ary ny baikoina mitoka-monina, toa mandeha mandritra ny vanim-potoana misavoritaka ny dia. Na eo aza ny fanalefahana famerana sy ny fanantenana ho an'ny fifohazana amin'ny fahavaratra ho avo dia avo, ny 'pingdemikia' dia manana ny mety hamerana ny fivezivezena ary hanakana ny fanarenana an-trano any Angletera.
Mba hanamafisana ny famandrihana dia maro ireo mpandraharaha no nametraka politika famerenam-bola malala-tanana ary mety hiatrika ny fahatsinjovan'ireo mpandoa vola raha toa ka miakatra ny tranga, ary misy vokany ny famandrihan-dia.
Ny politika famerenam-bola manintona dia nampiroborobo ny varotra ho an'ny mpandraharaha maro, na izany aza, ny fiakaran'ny tranga COVID-19 dia mety hanomboka hisy fiantraikany amin'ny karaman'ny mpandraharaha. Mety ho maina ny fikorianan'ny vola ho an'ireo mpandraharaha tratry ny fanafoanana be dia be, mety hidina ny fidiram-bola ary hitohy ny tolona ara-bola.
6 Aogositra 2021 amin'ny 19:42
Italia dia ao anaty sambo iray ihany!